3 Yakasarudzika Indasitiri Dhijitari Kushambadzira Matipi
China, April 14, 2016 Chipiri, April 12, 2016 Muhammad Yasin
Hapana mubvunzo kuti kushambadzira kwedhijitari chikara chine simba - uye imwe helluva inopenga chikara ipapo. Zvakanyanya sekuda kwedu tese kufunga kuti kushambadzira kwedigital kwakangofanana chero zvodii, hazvinyatso - uye zvikonzero zvacho zviri pachena. Sebhizimusi, unogona kusarudza kupa zvimwe zvikamu zvenguva yako uye bhajeti kune akasiyana marudzi edhijitari kushambadzira: zvemagariro midhiya, PPC, kudzorera zvekare, vhidhiyo kushambadzira, e-mail kushambadzira, SEO, webhusaiti chishandiso optimization uye zvichingodaro.
Zvakadaro, chii chinotonyanya kunakidza kucherechedza inzira iyo maindasitiri akasiyana anokoshesa marongero avo edhijitari ekushambadzira. Nekuti maindasitiri akasiyana anonyatso kuve nezvinangwa zvakasiyana zvebhizinesi, zvimwe chete maturusi uye mapuratifomu angangowana iwo mhedzisiro anozoburitswa. Uye zvinonyanya kufadza kuona kuti maindasitiri akasiyana anozviratidza sei online uye kuti anowanikwa sei ivo pachavo kune vatengi uye tarisiro.
Pamusoro pebasa rangu rebasa, ndakasangana nevanhu vazhinji vekutengesa mumaindasitiri mazhinji akasiyana. Munguva yekusangana kwangu, ndakadzidza huwandu hwakawanda pamusoro pemaitiro ekushambadzira avanoshandisa kuzadzisa zvinangwa zvavo. Sezvakatarisirwa, mazhinji emazano akashandiswa akaitirwa kune iwo maindasitiri - uye hongu, vakabudirira. Kana iwe uri mushambadzi mune chero eanove mashanu maindasitiri pazasi, iwe uchazoda kuramba uchiverenga. Heano matatu anoshanda ekushambadzira edhijitari matatu eakasiyana maindasitiri:
Maoko pasi, imwe yeanonyanyisa maindasitiri kumusika kune indasitiri yekurapa. Chikonzero chikuru cheizvi ndechekuti haugone kutaura nekushinga se "kurapwa kwakadai KURAPA urwere hwako." Kazhinji, iwe unogona chete kutaura humbowo hwekuti izvi zvakabatsira vanhu vazhinji (Ex: "kurapwa uku 98% inoshanda", kana kuti INOGONA kubatsira. Zviripachena, iyi i100% nyaya yemutemo.
Zvakadaro, kunyangwe nezvirambidzo zvinouya nekuburitsa mameseji anotenderwa zviri pamutemo, zvipatara, makiriniki uye zvimwe zvivakwa zvezvehutano vachiri nemukana wakanaka (uye kukwana kwakaringana) kwekunyatso "bata zvinhu zvavo." Imwe yedzakanakisa nzira dzekuita izvi muindasitiri yezvokurapa ndeyekuita yako kuronga uye kuratidza iwe hanya. Kuchengetedza hutano inyaya yakakomba; saka wadii kuenda mamaira ekuwedzera kuratidza kuti vatengi vako (kana varwere, zvirinani) vari mukufarira kwako.
Kunyangwe hazvo sangano rako richinyatso kuratidza hunhu hwehunhu mukati mewebhusaiti yavo uye nezvimwe zvekushambadzira, zvemagariro venhau inzira iri nyore kwazvo yekuwana iwo mameseji ekuchengeta varwere vatsva nevazvino. Pamwe pamwe nezviziviso zvehutungamiriri (Ex: Hofisi iyi ichavharwa kuti ivake. Kana Dr. Williams ari kunze kwehofisi), murongi wezvemagariro ako anogona kuenda mamaira akawedzera nekugovana zvinyorwa zvekugara uine hutano munguva yechando, kana kupa matipi akajairwa. zvekugara uine hutano pachiitiko chemuno (Ex: Kuita sarudzo dzine hutano kuState Fair). Kunyangwe kugovana mapikicha ane hunhu kunogona kuita kuti varwere vanzwe kugadzikana neako brand - kunge pikicha yeMapurisa Anosiya madonati evashandi veNursing mukati meBIG zororo revhiki. Izvo zvinhu zvidiki izvo zvinosiyanisa sangano rako kubva kune zvimwe. Nyaradzo ndiyo # 1 kunzwa varwere vanoda kunzwa kana vachitsvaga wekutanga chiremba wekurapa kana kusarudza kwavanenge vachiitira kuvhiyiwa.
Kunge indasitiri yezvokurapa, indasitiri yemotokari inokwikwidza zvakanyanya… pamwe kutokwikwidza. Vanhu zvirokwazvo vane zvavanofarira zvezvipatara nemakiriniki zvavari kuda kuenda, asi kana Push ikauya kuzosundidzira, kana iwe uine emergency, uchaenda kuchipatara chiri padyo kutanga. Zvipatara zvinowanzo gara zvakavhurika - asi zvimwe zvinongoita zvirinani, uye zvine mukurumbira uri nani pane vamwe.
Muzuva rino nezera, zvisinei, iyo indasitiri yemotokari yakangonaka chete sekuvapo kwayo pamhepo. Nekuti mota idyari hombe yekudyara, vatengi vanoita zvakanyanya kutsvagisa online sevanhu zvinogoneka - izvo zvinosanganisira kuongorora webhusaiti yako yekutengesa kubva kumusoro kusvika pasi. Izvo zvakati, kana iwe uchida kuve nechokwadi chekuti vatengi vako vanogara vachibatirana newebsite yako parwendo rwavo rwekutenga mota, iwe unofanirwa zvachose kubhadhara zvakanyanya kune yako mota yekutengesa pamhepo kushambadzira; uye chengeta yako yose yeuwandu uye kukwidziridzwa up-to-date. Vanhu havana nguva yekufonera yako yekutengesa kumusoro uye vobvunza kana chimwe chinhu chichiripo kana kusimudzira kuchiri kuitika. Kana paine chinhu chiripo pane yako webhusaiti, vatengi vari kutarisira kuti ive iri mujenya. Pamusoro pezvo, vatengi vanoda kukwanisa kushandisa zvese zviripo izvozvi mune yako chaiyo showroom. Kana vatengi vakaona mota yavanofarira online, mikana yakanaka iyo ichaenda mune yavo yepamusoro 3 mota sarudzo; saka ita shuwa kuti yako saiti haina kudonha kumashure.
Iyo yekupedzisira, uye zvine nharo yakanyanya kunetsa indasitiri yandichange ndichikurukura ndeyeIresitorendi Indasitiri! Chikonzero ini ndichiti "chakanyanya kunetsa" chiri kukonzerwa ne huwandu hwakawanda hwekuchengetedza hunodiwa kubata ese online ongororo, makomendi uye zvichemo zvinouya kubva kune vatengi kwese kwese kwepfungwa. Uye sekuziva kwako, iyo inokurumidza uye nekubudirira nyaya yekuresitorendi yakagadziriswa, zvirinani zviri kune kwavo mukurumbira zvese zviri online nekunze. Nekuda kwekuti zvave nyore sei kutumira mhinduro online, maresitorendi inofanirwa kuita nhamburiko dzese kupindura kune ese mazwi chero nguva sevanhu zvinogoneka - zvakanaka kana zvakaipa! Zvekare, zvishoma zvinoenda kure nzira yekushandura mumwe munhu kuva mutengi kwehupenyu hwese.
Masocial media mapuratifomu senge Facebook anotendera vashandisi kuyera pachena mapato, pamwe nekusiya wongororo. Kana iwe uri wepamaneja admin, iwe unowana nekukurumidza ziviso kana mumwe munhu akasiya wongororo pane rako peji. Kuti usiye chimiro chakanaka pavari, chakanyanya kunaka uye chakadzikama kuita kupindura kwavari mukati memaawa makumi maviri nemana - kunyanya kana iri ongororo yakaipa. Kana vatengi vari mukupisa kwekanguva, ivo vanoda kuti zvinhu zvigadziriswe ASAP.
Kana uchipindura kuongororwa kwakaipa, ona maitiro aungaita kuti zvinhu zvive nani. Kana iri ongororo yakanaka, tora nguva yekuvatenda mukati menguva imwecheteyo. Havasi ivo chete vashandisi vari kuona ako maratidziro emutengi, asi vari kuonawo maitirwo avo. Zvisinei nekuti ongororo yacho haina kunaka kana kuti kwete, nzira yaunozviratidza iwe kumutengi zvinoreva mutsauko uripakati pekamuri rakazara revanhu vakamirira tafura; uye mutengi maawa maviri ese. Unyanzvi zvinhu zvese! Vanodyira vanogamuchirwa kuti vapindure kune vatengi pane mamwe mawebhusaiti saiti saYelp uye Urbanspoon.
Kunyange chiri chokwadi kuti akasiyana maficha ekushambadzira edhijitari anogona kushandiswa neinenge sangano, mhando dzemadhijitari ekushambadzira mapuratifomu uye matekiniki anoshandiswa anosiyana zvakanyanya zvichienderana neindasitiri. Izvo zvinoonekwa sezvakakosha kune imwe indasitiri zvinogona kunge zvisina kukosha zvakanyanya kune imwe. Maindasitiri akasiyana ane zvinangwa zvakasiyana, uye nekudaro, nzira dzakasiyana dzekushambadzira kune vatengi online.
Tags: kushambadzira kwemotokaridigital advertisingindasitiri yedhijitari kushambadziraindasitiri kushambadzirakushambadzira kwekurapakuresitorendi kushambadziraTsvaga Kutengesaevanhu vezvenhauSocial Media Marketing
12 Zvidzidzo Zvakarurama kubva Extreme uridzi kuna Marketing
Kuchekera iyo Yechinyakare-Dhijitari Kushambadzira Kupatsanura
Jul 15, 2016 pa 4: 05 AM
Izvi zvinoratidza kuti kushambadzira kwedhijitari haisi nyaya yakamanikana chete asi yakafara uye inochinja. Dhijitari yekushambadzira tekinoroji inotsanangura eccentricity yenyika yekutengesa. Iyo yekurapa, mota uye maresitorendi indasitiri mashoma emazhinji maindasitiri anotungamira pasi rose. Naizvozvo, ndinogona kubvuma kuti kushambadzira kwedigital kwatora danho nyowani nyowani.